Awaamiir hor leh ayaa ka soo baxday masuuliyiinta dhanka ammaanka Maamulka Puntland – STAR FM SOMALIA
Awaamiir hor leh ayaa ka soo baxday masuuliyiinta dhanka ammaanka Maamulka Puntland, amaradaasi oo ku aadan in si sharci ah lagu joogo deeganada Puntland dadka u dhashay iyo dadka aanan u dhalan intaba.
Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Cabdi Cali Xersi (Qarjab) ayaa sheegay in laga doonaayo dadka soo galaya deeganada maamulka Puntland inay qaataan sharciga marka ay galaan, sidoo kalena marka ay galayaan deeganada Puntland laga doonaayo qof wakiil ka (Damaanad).
Cabdi Cali Xersi ayaa sheegay dadka sharciga laga doonaayo inaan look ala saareyn reer Puntland iyo dad kale, balse qof waliba oo Puntland ku nool laga doonaayo sharciga dalka ku jooga.
“Waxa weeye dadka reer Puntland meel kasta oo ay joogaan inay qaataan Documenti dalkooda ku joogaan (Dal ku joogid wax la yiraahdo) dadka soo galaya oo xuduudaha ka soo galaya ama qaxootiga ah ama Puntland imaanaya waa inay noqdaan dadka marka horeysa sharci qaadanaya marka ay yimaadaan, marka ay imaanayaana ku yimaada dad Wakiil ka ah ama damiin ka ah.”
Amarada kala duwan ee ka soo baxaya maamulka Puntland ayaa isa soo taraya wixii ka dambeeyay, markii Shabaab duulaan ay ku qaadeen deeganada maamulka Puntland.
Wasiirka Amniga Puntland ayaa tilmaamay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadaayo qofkii aanan sharci ku joogeyn deeganada Puntland oo xabsiga la dhigi dooni, isaga oo dhanka kale Bulshada ugu baaqay inay kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka suggida amniga si looga gaashaanto weeraro Shabaabka ay geystaan.
Puntland ayaa dhawaan shaacisay inay ka feejigan tahay falal lidi ku ah dhanka ammaanka oo Shabaab ay ka geystaan deeganada Maamulkaasi.